ရေကန်များစာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာရင်းသည် ဒေသအလိုက် ထိပ်ဆုံး နံပါတ် သုံးမှ ငါးအဆင့်ရှိ အဓိကကန်များ၏ စာရင်း ဖြစ်သည်။ "အဓိကရေကန်" အဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် ဒေသတွင် ဧရိယာ၊ အနက်၊ ထုထည် စသည်တို့တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်ခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံကာ ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့အပြင် ဤစာရင်းတွင် ဒေသအလိုက် ကန်များ၏ စာရင်းကိုလည်း လင့်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ ဖော်ပြပေးထားသည်။
၁.၁ အာဖရိကရှိ ရေကန်ကြီးများ
၁.၂.၇ Cape Verde
၁.၂.၈ Central African Republic
၁.၂.၁၂ Republic of the Congo
၁.၂.၁၅ Equatorial Guinea
၁.၂.၁၇ Eswatini (Swaziland)
၁.၂.၂၄ Ivory Coast
၁.၂.၄၀ São Tomé and Príncipe
၁.၂.၄၃ Sierra Leone
၁.၂.၄၅ South Africa
၁.၂.၄၆ South Sudan
၃.၁ International lakes of Asia
၃.၂ Lists by country
၃.၂.၁၁ East Timor
၃.၂.၂၁ North Korea
၃.၂.၂၂ South Korea
၃.၂.၃၇ Saudi Arabia
၃.၂.၃၉ Sri Lanka
၃.၂.၄၅ United Arab Emirates - UAE
၄.၁ International lakes of Europe
၄.၂ Lists by country
၄.၂.၁ Republic of Albania
၄.၂.၈ Bosnia and Herzegovina
၄.၂.၁၂ Czech Republic
၄.၂.၃၄ North Macedonia
၄.၂.၄၀ San Marino
၄.၂.၄၉ United Kingdom
၅ North and Central America
၅.၁ International lakes of North America
၅.၂ Lists by country
၅.၂.၁ Antigua and Barbuda
၅.၂.၆ Costa Rica
၅.၂.၉ Dominican Republic
၅.၂.၁၀ El Salvador
၅.၂.၁၉ Saint Kitts and Nevis
၅.၂.၂၀ Saint Lucia
၅.၂.၂၁ Saint Vincent and the Grenadines
၅.၂.၂၂ Trinidad and Tobago
၅.၂.၂၃ United States of America - USA
၆.၁ Lists by country
၆.၁.၂ Federated States of Micronesia
၆.၁.၅ Marshall Islands
၆.၁.၇ New Zealand
၆.၁.၉ Papua New Guinea
၆.၁.၁၁ Solomon Islands
၇ South America
၇.၁ International lakes of South America
၇.၂ Lists by country
၈ Former lakes
၉ Extraterrestrial lakes
အခြားကြည့်ရန်။ အာဖရိကရှိ ရေကန်ကြီးများ နှင့် ရစ်ချိုင့်ဝှမ်းရေကန်များ
နက်ဆာကန် (Lake Nubia in Sudan)
တာကနကန် (Lake Rudolf or Rudolph)
ဝိတိုရိယအိုင် shared between Kenya, Uganda and Tanzania.
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဘီနင်နိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း
Foramore comprehensive list, see ကင်မရွန်းနိုင်ငံရှိ ကန်များစာရင်း.
ဤအပိုင်းကို တိုးချဲ့ရေးသားရန် လိုအပ်သည်။ (June 2020)
Central African Republicပြင်ဆင်
Republic of the Congoပြင်ဆင်
Foramore comprehensive list, see ဂျီဘူတီနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း.
Foramore comprehensive list, see အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း.
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကင်ညာနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း
São Tomé and Príncipeပြင်ဆင်
International lakes of Asiaပြင်ဆင်
Lake Baikal – Lake Baikal is located in Siberia in southeastern Russia, just north of Mongolia. Considered the oldest surviving freshwater lake on the planet, it is also the deepest body of water in Asia at ၅,၃၁၅ ပေ (၁,၆၂၀ မီတာ), and the largest freshwater lake by volume, containing 20% of the planet's fresh water. An elongated lake, it hasamaximum width of ၆၀ မိုင် (၉၇ ကီလိုမီတာ) with an approximate length of ၃၈၉ မိုင် (၆၂၆ ကီလိုမီတာ), and is fed by more than 300 rivers and streams.
Caspian Sea – Situated between Asia and Europe and fed by the Volga and Ural Rivers in the north, the Caspian Sea is nevertheless somewhat salty in its central and south portions. The surface area measures ၃၇၁,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၄၃,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), withamaximum depth of ၁,၀၂၅ မီတာ (၃,၃၆၃ ပေ).
Lists by countryပြင်ဆင်
United Arab Emirates - UAEပြင်ဆင်
အခြားကြည့်ရန်။ List of largest lakes of Europe
International lakes of Europeပြင်ဆင်
Republic of Albaniaပြင်ဆင်
Bosnia and Herzegovinaပြင်ဆင်
North and Central Americaပြင်ဆင်
International lakes of North Americaပြင်ဆင်
Lake Memphremagoga၄၀-မိုင်-long (၆၄-ကီလိုမီတာ) glacial lake that extends from Vermont into Canada
အခြားကြည့်ရန်။ North American Great Lakes
Antigua and Barbudaပြင်ဆင်
Saint Kitts and Nevisပြင်ဆင်
Saint Vincent and the Grenadinesပြင်ဆင်
Trinidad and Tobagoပြင်ဆင်
United States of America - USAပြင်ဆင်
Federated States of Micronesiaပြင်ဆင်
Papua New Guineaပြင်ဆင်
International lakes of South Americaပြင်ဆင်
အခြားကြည့်ရန်။ List of prehistoric lakes
↑ See map in Aldhous (August 23, 2014). "First samples of Antarctic lake reveal thriving life". New Scientist.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Lakes of Asia, Landforms of Asia – Worldatlas.com။ Reunion Technology Inc.။
↑ "Reclaiming the Aral Sea"၊ Scientific American၊ April 2008။
↑ "Aral Sea 'one of the planet's worst environmental disasters'"၊ The Daily Telegraph၊ April 5, 2010။9August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 April 2010။
↑ The Highest Lake in the World။ 24 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေကန်များစာရင်း&oldid=725928" မှ ရယူရန်
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။